Al-shabaab oo dilay Cumar Khalafe, 69 jir masiixi Somali ah & 2 wiil oo uu dhalay. – Radio Daljir
Al-shabaab oo dilay Cumar Khalafe, 69 jir masiixi Somali ah & 2 wiil oo uu dhalay.
Seteembar 23, 2009 12:00 b 0
Marka, Sept 23 – Waxaa lagu dilay meel 10 km u jirta Marka Cumar Khalafe oo ah Somali 45 sano aaminsanaa diinta Masiixiga.
Dilka Khalafe ayaa lagu sababeeyey kadib markii lagu joojiyey Khalafe iyo 3 wiil oo uu dhalay kontarool ku yaal duleedka, lagana helay 25 kutub oo Injiil ah ‘Bible’ oo uu sitay.
Meydka Khalafe ayaa la geeyey Marka, iyada oo 25-ka kutubtna la dul saaray maydkiisa.
Al-shabaab ayaa la sheegay in ay hore u galeen tuulada Yonday oo la sheegay in ay ku nool yihiin 66 masiixiyiin Somali ah, lana sheegay in ay ku shiraan guri uu leeyahay Salat Mberwa, oo la sheegay in uu yahay madaxda kooxdan masiixiyiinta ah.
Sida ay daabacday mareegta www.compassdirect.org oo u baahisa warar ku saabsan Masiixiyiinta caalamka ayaa sheegay in Khalafe loo dilay dinta uu aaminsan yahay ee Masiixiga.
Batula Ali Arbow, oorida uu ka dhintay Khalafe ayaa sheegtay in Al-shabaab ay kaxaysteen odaygeeda iyo 3 wiil oo ay dhaleen, da’dooduna u ay kala tahay 12, 11 iyo 7 jiro.
Sida ay cadaysay Batula, waxaa ay dileen 2-dii wiil ee weynaa, halka 7 jirkiina ay sii daayeen.
M/weyne Faroole oo kulan wadatashi ah la yeeshay Issimada gobolka Bari. [Dhegaysi …]
2 mooshin oo dalbaya in xilalka laga qaado M/weyne Riyaale & Afhayeen Cirro oo la hor geeyey baarlamaanka Somaliland.